Germany haazorambi kwairamba Bitcoin kana rinoshandiswa senzira muripo nzira - Blockchain News
Kurume 1, 2018 arun
Germany haazorambi kwairamba Bitcoin vanoshandisa kushandisa cryptocurrency senzira mubhadharo, Bazi Finance adaro.
The utungamiri, rakabudiswa Chipiri, anogadza Germany kunze U.S., apo Internal Revenue Service anobata Bitcoin sezvo nzvimbo mutero zvinangwa – izvo zvinoreva kuti kana munhu American anotenga kofi pamwe Bitcoin, zviri pamutemo vaiona sero pfuma uye zvinogona pasi guta achawana mutero.
pachinzvimbo, Germany nehanya Bitcoin sezvo yakaenzana pamutemo orudo mutero zvinangwa kana kushandiswa senzira mubhadharo, maererano gwaro idzva.
Zvinoshamisa, itsva gwaro German wakarurama zvisarudzo zvayo mutero kuburikidza maererano cryptocurrencies nzira nomutemo mubhadharo, achitaura:
“Cryptocurrencies, eg. Bitcoin, anova yakaenzana nomutemo nzira mubhadharo, insofar sezvo izvi rakapotsa dzeEurope vane nzira contractual, nekukurumidza, uye zvinogamuchirwa nzira muripo.”
Previous Post:Sei kuwana pamusoro intraday cryptotrading?
Next Post:China ari kurambidza vagari kubva vanotengesa pamusoro vatorwa exchanges.
Atornille la empaquetadora anoti:
Kurume 19, 2018 pa 8:49 AM
Kubvumbi 29, 2018 pa 9:52 AM
Chivabvu 17, 2018 pa 2:42 AM
Chikumi 1, 2018 pa 11:54 PM
Chikumi 2, 2018 pa 5:42 AM
Gunyana 3, 2018 pa 7:59 AM
Gumiguru 19, 2018 pa 2:28 AM